Varipi Vatengesi Vachishandisa Mari Yavo Yekushambadzira? | Martech Zone
Varipi Vatengesi Vachishandisa Mari Yavo Yekushambadzira?
Chitatu, October 19, 2016 China, Gumiguru 20, 2016 Douglas Karr
Zvinoita sekunge kumwe kushomeka kunoshamisa kuri kuitika kumberi kwekutengesa sezvo zviri zvekushambadzira. Dhijitari matekinoroji ari kupa mikana inoyevedza iri kutyaira mhedzisiro - uye vatengesi vari kucherechedza. Ini handidi kuturikira zvisizvo mhedzisiro sekufunga kuti ndeyechinyakare maringe nedhijitari kushambadzira. Iyo nyaya yekushomeka. Kushambadza paterevhizheni, semuenzaniso, kuri kukura mukukwanisa kwayo kunongedza vataridzi zvichibva mudunhu, maitiro, uye nguva.
Pfungwa yekuita yakatekeshera nevatengesi vevatengesi izvozvi. Tiri kuona kuwedzera kukuru mukutsvaga, nekukurumidza, kushambadzira pamhepo semhedzisiro. Randy Cohen, purezidhendi we Mushambadzi Pfungwa
Chiitiko cheadhijitari chiri kuwedzerawo ruzivo rwekutengesa, sezvakaburitswa mu InMoment's 2016 Retail Maindasitiri Mushumo. Zvichida zvimwe zvekushambadzira mari zvinofanirwa kuchinjirwa kune yevatengi ruzivo online. Zviwanikwa zvinosanganisira:
Vatengi vanopedza zvakapetwa kaviri muchitoro apo ivo vakabatsirwa nemushandi
Mutengi anoshandisa Times 2.2 times pavanoshanyira webhusaiti yechiratidzo vachiri kuchitoro
Kushandisa kwevatengi kunowedzera kana apo vatengi vari kuita nevashandi vese uye webhusaiti yechiratidzo. Iyo yakawanda rubatsiro iyo mutengi inogamuchira, yedhijitari kana munhu, zvakanyanya iye kana iye zvaari kuda kushandisa.
Kuona kuderera kweemail kushambadzira mari kunoita kuti ndinetseke kuti mutengo wekushambadzira neemail wadzikira here kana kuti pie yematanho yawedzera, zvichikonzera kuti mabhajeti akapetwa achinjwe kubva kuemail kuenda kune dzimwe nzira dzinoda kutariswa. Email kushambadzira ndiyo hwaro chero hwekutengesa kana hwekutengesa dhijitari zano, saka ndinovimba vatengesi havasi kunyatso kudzora kwavo email kushambadzira kuyedza.
Mumwe wemibvunzo inonakidza, mumaonero angu, yaive yekuti kana yekutengesa inofanirwa kunge ichishandisa a chitoro hunyanzvi agency. Mhinduro yacho yaive yakaipa zvakanyanya. Izvi zvinogona kunongedzera kune imwe nyaya, kugona kwemasangano kuenderana netekinoroji uye maitiro evatengi. Mazhinji ma agency akaburitsa hunyanzvi mune hombe dhata, zvemagariro midhiya, ruzivo rwe nhare, omnichannel, uye midhiya enhau ari kusundira kumberi kwekushambadzira - kupfuura indasitiri yekutengesa.
Heano infographic kubva kuAdWeek, Vatengesi Vezvekutengesa Tarisa Mberi:
Tags: kushambadzaadweeknhepfenyurowayachitorochitoro kushambadziraterevhizheni